Dawlada Atobiya oo ka Shaqaynaysa Soo Duufsashada Qurba Joogta Maraykanka – Rasaasa News
Mar 9, 2011 Dawlada Atobiya oo ka Shaqaynaysa Soo Duufsashada Qurba Joogta Maraykanka
Wufuud isugu jira siyaasiyiin, wasiiro iyo ganacsato magac ku leh dalka ayey xukuumada Itobiya u diri doonta dhawaan dalka Maraykanka, wufuudaas oo ka dhaadhicin doona kumanaanka aslakoodu Atobiyanka yahay ee degan dalka Maraykanka in ay dib ugu soo laabtaan dalka maal gashadaana.
Dalka Maraykanka waxaa ku nool malaayiin asalkoodu Atobiyan yahay, kuwaas oo dalka Maraykanka soo galay wakhti fog, kuna haysta mehardo kala duwan. Atobiyanku waxay ka mid yihiin dadka Afrikanka ah la tirsado dalka Maraykanka dhinaca aqoonta, shaqooyinka iyo ganacsiga.
Atobiyanku waxay leeyihiin macalimiinta ugu badan Afrika ee wax ka dhiga Jaamacadaha dalka Maraykanka. Waxayna aad ula socdaan xaalada siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho ee uu ku sugan yahay dalka Atobiya, waxayna hagaan xidhiidhka u dhaxeeya dalka Atobiya iyo dalka Maraykanka.
Hadaba, xukuumada R/wasaare Meles ee haatan ka jirta Atobiya oo in badan lagu xanto in ay tahay xukuumada kali talis ah, ayaa hadana wax badan ka qabatay horumarka dalka gaar ahaana caasimada Addis Abab.
Arintan oo soo jiidatay dad badan oo Atobiyan ah oo booqasho ku taga dalka, waana arinta maanta ku dhiirisay xukuumada in ay ka ololayso dalka Maraykanka iyada oo ku faanaysa in ay wax badan qabatay.
Wufuuda tagi doona bisha 10 April, oo aan wali la shaacin magacyadooda, ayaa waxay kulamo la wadaagi doonaan Qurba joog Atobiyan ah oo ku nool 10 magaalo oo Maraykan ku yaal, waxayna u sharxi doonaan heerka uu marayo horumarka dalku iyo in ay qurba joogtu ka qayb qaataan horumarinta.
Xukuumada R/wasaare Meles, ayaa muddo door ahba isticmaalaysay siyaasad ah in Quba joogtu ay wanaag badan u keeni karaan dalka, hadii ay ku soo laabtaan, xitaa hadii ayna aqoon iyo lacag midna haysan.
Xubno Taageera Kooxda Jwxo-shiil, oo Calan Keenay Xarun Lagu Tababaro Dadka Shaqo La,aanta ah